Home News Where is the allegiance of Our President? (Aaway Daacadnimada MW Farmajo Ballan...
Where is the allegiance of Our President? (Aaway Daacadnimada MW Farmajo Ballan Qaaday?)
Waa markii ugu horaysay oo taariikhda dalkeenu soo marto in Madaxwayne haysta jinsiyad dal kale uu madax ka noqdo dalkeenna. Madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo wuxuu mar hore u dhaartay in uu ilaalinayo sharafta iyo danaha dalka Maraykanka oo uu jinsiyadiisu qaatay.
Madxwayne Farmaajo ma aha madaxwaynihii ugu horeeyay ee haysta jinsiyada Maraykanka ee dal kale madax ka noqda, waxaa ka mid ah madaxwayneyaasha kale ee haystay jinisyada Maraynkanka inta aanay Madaxwayne ka noqon dalalkooda: Ashraf Ghani (Afgaanistan), Valdas Adamkas (Lithuania), Janet Jagan (Guyana) iyo kuwo kale.
Madaxwayne Farmaajo markii loo doortay in uu madaxwayne ka noqdo dalkeena, xukuumadda Maraykanka way la soo xiriirtay waxaana loo sheegay sharciyada ka yaalla marka uu qof haystaa jinsiyada Maraykanka madax ka noqdo wadan kale. Marka qof haysta jinsiyada Maraykanka uu dal kale ka qabto xil siyaasadeed waxaa u furan laba wado in uu mid raaco. Tan kowaad in uu ka tanaasulo haysashada jinsiyada Maraykanka si uu helo xuquuqda iyo protocolka loo ogol yahay madaxwayne dalka kale (Foreign head of state) waa sida ay yeeleen dhamaan madaxdii ka horaysay Madaxwayne Farmaajo. Tan labaad in uu sii haysto jinsiyada Maraykanka taas oo uu macnaheedu yahay in uu u hogaansamayo sharciyada Maraykanka ilaalinayana sharafta iyo danaha Maraykanka, islamarkaasna aanan loola dhaqmi doonin sida madaxwayne dal kale (Foreign head of state). Sidoo kale waxaa loo sheegay haddii uu doorto midda labaad bacdamaa uu yahay muwaadin Maraykan ah ay dowladda Maraykanka siin doonto xuquuq dheeraad ah oo ay ka mid tahay ilaalinta amnigiisa iyo ka taageeridda dhinac siyaasadda. Madaxwayne Farmaajo isaga oo aanan ka talo gelin hay’adaha dastuuriga ee dalka ayuu doortay tan labaad, waana Madaxwaynihii ugu horeeyay addunka ee sidaas yeela. Dhamaan madawayneyaasha kale ee aan kor ku soo sheegnay waxay doorteen tan kowaad oo waxay ka tanaasuleen jinsiyada Maraykanka.
Haddaba waxaa is waydiin leh maxay tahay caqabadaha uu Madaxwayne Farmaajo la kulmay ee ku wajahan xilgudashada Xilka Madaxwayne ee loo dhaariya. Tan kowaad uma suurta gelin in uu booqasho ku tago dalka Maraykanka oo ay ku taallo xaruunta qaramada midoobay oo inta badan go’aanno masiiri ah oo dalkeena quseeya lagu go’aamiyo. Haysashada dhalasha Mareykanka waxay gacmaha ka xereysaa inuu maadaxweyne Faarmajo inuu ku dhaqmo qeybo ka mid ah diinta Islaamka. Sidaas darted haddii is waafaqi waayaan sharciyada Somaliya eek u qoran distuurka iyo kan Marekaanka MW farmajo waxaa uu raacayaa kan Mareykanka, waana arrin muuhiim ah. Maadaxweynaha kuma dhaqmi karo qawlkii ilaahay ee Suura-tu-albaqara aayadda 179 (Quran.com/2/179). Aayaddaan oo uu rabbi ku leeyahay “ Waxaa idiin kugu sugan Qisaasta nolol dadka wax garadka ahow waxaanad mudan tihiin inaad dhowrsataan” Markaas Madaxwayne Farmaajo isagoo ilaalinaya sharciga Maraykanka oo uu jinsiyadiida wali haysto ka gaabsaday qaybo ka mid ah awoodaha Madaxwaynaha taas oo ay ka mid tahay saxiixida fulinta xukunka dilka ah ee lagu xukumo dambiyada dilka ka gaysta dalka. Tan iyo intii la doortay Madaxwayne Farmaajo wali lama fulin xukun dil ah, iyadoo aan ognahay in Maxkamadaha dalka ay xukumeen danbiilayaal badan oo sugaya in lagu fuliyo caddaaladda. Dood waa laga qabi karaa in qaabka maxkamaduhu u xukumeen inuu u baahan yahay in wanaagsan loo hubiyo oo aan khalad lagu gooyn naf uu dilkeeda Rabbi xaraantimeeyey. Waxaa suurtagal ah in ay jiraan arrimo kale oo badan oo aanan la ogayn oo uu Madaxwayne Farmaajo haysashada jinsiyada Maraykanka darted uu uga gaabsanayo fulintooda ama uu u fulinaya sababta haysashada jinsiyada Maraykanka darted iyadoo aanan loo eegayn danta dalkeena.
Arrimaha uu ka faaiiday Madaxwayne Farmaajo haysashada jinisyada Maraykanka waxaa ka mid ah taageerada siyaasadeed ee xukuumada Maraykanka la garab istaagtay Farmaajo qilaafkii soo kala dhexgalay dalkeena iyo kan Imaaraadka iyo tan safaaradda Maraykanka la garab istaagay xiligii ay xukuumada mooshinka ka waday Gudoomiye golaha shacabka Mudane Maxamed Cismaan Jawaari.
Haddaba waxaa haboon in hayadaha dastuuriga ah ee uu ugu horeeyo Golaha Shacbiga in ay ku baraarugaan masuuliyada saaran, dalkana ka badbaadiyaan in cid aan dalkan oo Kaliyah daacad u ahayn xilkiisa qabato ama sii hayso.
Xilalka siyaasadeed ee muhimka ah ee loo baahan yahay in laga ilaaliyo dadka haysta jinsiyadaha kale waxaa ka mid ah: Gudoomiyeyaasha Baarlamaanka, Raisalwasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gashaandhiga, taliyeyaasha ciidamada, safiirada dalkeen matalaya. Barlamaanka waxaa looga fadhiyaa in uu sharci ka saaro arrimahan si loo dhowro sharafta iyo madaxbanaanida dalka. Waxaana mar waliba muhiim ah inaan lagu gafin shakhsi dhalasho dal kae ayuu haystaa darted.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo lagu Dhaliilay in uu Ina Adeerkiis Caanood Awoodda Ciidmadda Ku Wareejiyay!!
Next articleAl-shabaab oo Askari Ka Tirsan DF Maxkamad soo taagay iyo Xukun aan laga Fileeyn oo ay Rideen!!!